ကမ္ဘာပေါ် မှာ ဘာသာမဲ့ အများ ဆုံး နေထိုင် ကြသော နိုင်ငံ များ – BaHuTuTa
ကမ္ဘာပေါ် မှာ ဘာသာမဲ့ အများ ဆုံး နေထိုင် ကြသော နိုင်ငံ များ
December 28, 2020 admin Knowledge 0
၁။ ဆွီဒင် ( ၈၅ % ) ဘာသာမဲ့ – ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများ ကို ကူညီလျှုဒါန်းရာ တွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ် တစ် အများဆုံးဖြစ်သောနိုင်ငံ ၊ IT နည်းပညာ ထိပ်တန်းနိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်သည် ။
၂။ ဒိန်းမတ် ( ၈၀ % ) ဘာသာမဲ့ – စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံ အဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံထားရပြီး ဆွီဒင်ကဲ့သို. ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအား လျှုဒါန်းမှုမြင့်မားသောနိုင်ငံဖြစ် သည် ။.
၃။ နော်ဝေ ( ၇၂ % ) ဘာသာမဲ့ – UNDP မှ နေထိုင်ရန်အသင့်တော်ဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ် ထားခြင်းခံရ သောနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်များကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးသောနိုင်ငံ၊ လူအခွင့်အရေးအလွန်မြင့်မားသောနိုင်ငံဖြစ် သည် ။
၄။ ဖင်လန် ( ၇၀ % ) ဘာသာမဲ့ – အေးချမ်းစွာနေထိုင်တတ်သော လူအများစုနေထိုင်ပြီး နှစ်စဉ်အနောက်နိုင်ငံများတွင် သချာင်္ရမှတ်အားနှင့် စာဖတ်စွမ်းရည်ရမှတ်အား အများဆုံးနိုင်ငံ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရ သည် ။
၅။ ဂျပန် ( ၆၅ % ) ဘာသာမဲ့ – စီးပွားရေး အင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံ၊ အာရှရှိဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် အခြားအကူအညီများပေးသောနိုင်ငံ၊ လူတစ်ဦးခြင်း ကိုယ်ပိုင် အသိစိတ်ဖြင့် စည်းကမ်း ရှိသောနိုင်ငံ၊ နည်းပညာအဆင့်မြင့်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
၆။ တောင်ကိုးရီးယား ( ၅၂ % ) ဘာသာမဲ့ – GDP နှစ်စဉ်မြင့်တက်နေသောနိုင်ငံ စည်းကမ်းကောင်းသောနိုင်ငံ၊ ဂျပန်ကဲ့သို့နည်းပညာကောင်းသောနိုင်ငံ၊ ၎င်းတို့၏ ဖက်ရှင်နှင့်ရုပ်သံဇတ်လမ်းများကို ပြည်ပနိုင်ငံများကို လွှမ်မိုးအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
(မှတ်ချက်) ဆင်းရဲ ၍၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု ဉာဏ်စွမ်းမရှိသော၊ ပဋိပက္ခများပေါ များသော၊ စစ်ပွဲများအတောမသတ်သောနိုင်ငံများ အတတ်ပညာနည်းပါး၍၊ လူ.အခွင့်အရေးအားနည်းသောနိုင်ငံများကိုကြည့်လျှင် ဘာသာတရားအလွန်ကိုင်းရှိုင်းသောနိုင်ငံများဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပေ မည် ။
ဥပမာ – ဆိုမားလီယားသည် (၉၉.၉ %) ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများနေ ထိုင်ပြီး ပဋိပက္ခ အဖြစ်များဆုံး ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိဆုံးနိင်ငံဖြစ်သောကြောင့် UNDP မှ ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်ရန် မသင့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါ သည်။
ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများမှ ဘာသာရေး ထွန်းကားသော နိုင်ငံများ ကို ပြန်လည် လှုဒါန်းရသော အဖြစ်တွင် ဘာသာရေး ထွန်းကားသော နိုင်ငံများက အလှူခံခြင်းသာလျှင် အလွန်အကြီးမားဆုံး တီထွင်မှု အဖြစ်သာ ကျန်ရှိနေတော့ သည် ။ မည်သို့ မည်ပုံ အကြောင်း ပြပြီး အလှူ ခံရမည်ဆိုတာကိုက သူတို့၏ တီထွင်မှု ပင်ဖြစ်သည်။
ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများတွင် မေတ္တာတရားထွန်းကား ၍ လူသတ်သော အပြစ်ရှိသူပင် ကြိုးစင်တင် သတ်ဖြတ်ခြင်း မလုပ်တော့ပေ။ ဘာသာရေး ထွန်းကားသော နိုင်ငံများသည်ကား ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလျှင် အကဲဆတ်မခံ ရိုက် ပုတ် သတ်ဖြတ် မီးရှို့ ဖျက်ဆီးပြစ်ဖို့ဝန်မလေး ကြသော မဟာဂရုဏာရှင်များ အဖြစ် ရပ်တည်ကြသည်။ သည်းခံခြင်း – Peace ငြိမ်းခြမ်းခြင်း စသည်တို့ကို Special နှုတ်မှ ထပ်တလဲလဲ ပြောဆိုသော လည်း ဘယ်သူမှ သည်းမခံ။
ဘာသာမဲ့ နိုင်ငံများ အိပ်စား ကာမ လျှော့၍ တီထွင်ကြံစချိန် ပိုပေးနေချိန်.. ဘာသာရေးထွန်းကားသော နိုင်ငံများ တွင် သက်ငယ်ပြုကျင့်မှု ကိုယ့်သမီးပါမချန် ပြန်ကျင့်မှု နေ့ခင်းကြောင်တောင် လူပြတ်သည့် နေရာမျိုးတွင် အမျိုးသမီးမိန်းကလေး တစ်ယောက် ထဲ မသွားရဲလောက်အောင် ကာမတနှာအားကြီး လွန်းမှု အိပ်စားကာမဖြင့် မူးယစ်သောက်စား ကာ ဘာသာမဲ့နိုင်ငံများမှ တီထွင်ကြံစသော ပစ္စည်းများအား မှိန်ရည် ရှက်ရည် အသုံးပြုကြ သည် ။
သာမန်ရိုးကျမဟုတ်တဲ့ ပစ္စည်းဆန်းဆန်းတွေကို တွေ့နိုင်မယ့် ကမ္ဘာ့လေဆိပ်များ
ပိုက်ဆံ တစ်ကျပ်မှ မရှိဘဲ စတင်လုပ် နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း (၆) မျိုး